Wepụtara nsụgharị ọhụrụ nke Lakka 2.3.2, nhọrọ magburu onwe ya maka egwuregwu ụlọ akwụkwọ ochie | Site na Linux
Wepụtara nsụgharị ọhụrụ nke Lakka 2.3.2, nhọrọ magburu onwe ya maka egwuregwu ụlọ akwụkwọ ochie
Ọchịchịrị | | Nkesa
Lakka bụ nkesa Linux nke ahụ bụ dabere na RetroArch egwuregwu njikwa emulator, nke na-enye nnomi nke ọtụtụ ngwaọrụ ma kwado atụmatụ ndị dị elu dị ka egwuregwu egwuregwu ọtụtụ, ichekwa steeti, mmelite mma onyonyo nke egwuregwu ochie nwere shaders, ịwagharị egwuregwu, nkwụnye ọkụ nke egwuregwu egwuregwu na iyi egwu vidiyo.
Ozugbo i guzobere ihe niile, ị ga-enwe ihe njikwa egwuregwu niile iji emomie ihe niilesite na egwuregwu Atari na egwuregwu Playstation. Usoro a nwere obosara katalọgụ nke emulators nke ahụ ga - enyere anyị aka ịnụ ụtọ aha site na consoles dị iche iche dị iche iche, dịka SEGA, Nintendo, yana NES, SNES na Gameboy, na ọbụlagodi maka DOS ma ọ bụ egwuregwu ọgbara ọhụụ dịka ndị maka PlayStation ma ọ bụ PSP.
Lakka nwere nsụgharị ndị ahaziri maka nyiwe i386, x86_64 (Intel, NVIDIA ma ọ bụ AMD GPU), Raspberry Pi 1/2/3, oroma Pi, Cubieboard2, Cubieboard2, Cubietruck, Banana Pi, Hummingboard, Cubox-i, Odroid C1 / C1 + / XU3 / XU4, wdg.
1 Banyere ụdị ọhụrụ nke Lakka 2.3.2
2 Budata Lakka 2.3.2
Banyere ụdị ọhụrụ nke Lakka 2.3.2
Febọchị ole na ole gara aga Emepụtara Lakka 2.3.2 nke ohuru, nke a bụ ụdị izizi nke afọ na nke ga-abịa na ụfọdụ ozi na-atọ ụtọ, nke na RetroArch isi melite na mbipute 1.8.4 pụta ìhè.
Na ntinye nke ohuru a nke RetroArch 1.8.4 a na - amata ọkwa ihu igwe na ntụgharị asụsụ egwuregwu ozugbo.
Ọzọkwa, Lakka gụnyere akwụkwọ nyocha ọdịnaya ọdịnaya Ọ dịghị chọrọ maka playlist nchekwa data.
Usoro nyocha ọhụụ a na - ewere faịlụ niile na - ejedebe na ndọtị a maara na folda ma tinye ha na listi ọkpụkpọ maka sistemụ ahụ.
N'aka nke ọzọ, ahụmahụ na egwuregwu PS1 ka mma (PlayStation1) na-achọ ihe karịrị otu diski. Nke ahụ bụ, ndị na-arịọ itinye ebe diski nke abụọ n'ihi na egwuregwu ahụ sara mbara nke ukwuu. Agbakwunyere nhọrọ ọhụrụ iji maliteghachi ọdịnaya mgbe ị gbanwere diski na Ntọala> Ntuziaka onye ọrụ.
Na mgbakwunye ewepụla ọkwa spam niile, nke na-egosipụta ugbu a na mmemme nke ahụhụ, ma ọ bụ mgbe menu n'onwe ya anaghị enye nzaghachi ọhụụ zuru oke (rịba ama na iji hotkeys gbanye diski ka na-ewepụta ọkwa ọhụụ, ebe ọ bụ na a na-emekarị nke a naanị mgbe ọdịnaya na-agba ọsọ, yabụ na enweghị menu).
Oge ofma Ọkwa ozi metụtara diski a belatala ya n’ọkwa nwere ọgụgụ isi.
Pma ọ bụ akụkụ nke Lakka nuclei anyị nwere ike ịchọta gaa nuclei ọhụrụ vitaquake2 na vitaquake3 nke dị naanị maka usoro ntanetị maka ugbu a. Ndị a bụ mmeghe mmeghe nke igwe Quake II na III, n'otu n'otu.
Ngwurugwu ozo bu nke NeoCD otu nsụgharị NeoCD Neo Geo CD emulator, ọ bụ ihe ziri ezi na-arụ ọrụ mma karịa gara aga standalone emulator, ọbụna na ala-ọgwụgwụ ngwaike dị ka utu Pi.
Ugbu a Dosbox dochiri dosbox-svn, ebe ọ bụ na etinyere kernel dosbox-svn na mbụ, mana ebe ọ gosipụtara na ọ ka mma, a na-edochi ya ugbu a.
Budata Lakka 2.3.2
Maka ndị chọrọ inweta sistemu a Ha nwere ike ịme nke a site na ịga na webụsaịtị gọọmentị nke ọrụ ahụ.
Na ngalaba nbudata ya, ị ga-enwe ike nweta ihe onyonyo ahụ dịka ebe ịchọrọ ka usoro a rụọ ọrụ, ebe ọ bụ na, dị ka e kwuru n'elu, Lakka nwere ihe oyiyi maka ngwaọrụ dị iche iche.
Njikọ bụ nke a.
Maka ndị bụ ndị ọrụ Pipị Pi, mgbe ị nwetara onyonyo ị nwere ike iwunye onyonyo a na SD gị site na enyemaka nke Etcher.
Ma ọ bụ ọ bụrụ na ha bụ ndị ọrụ PINN ma ọ bụ ndị NOOBS, ha nwere ike chọọ sistemụ ahụ na katalọgụ ahụ, agbanyeghị na ugbua ụdị ọhụrụ nke sistemu a apụtabeghị, n'ime ụbọchị ole na ole sistemu ahụ ga-agwa ha maka mmelite ahụ ka enwere ike ibudata ma tinye ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Wepụtara nsụgharị ọhụrụ nke Lakka 2.3.2, nhọrọ magburu onwe ya maka egwuregwu ụlọ akwụkwọ ochie
Achọpụtara ọhụụ ọhụụ abụọ na-emetụta Intel